Niompana tamin’ny adihevitra momba ny zon’olombelona any amin’ireo faritany avaratra-atsinanana ilay Fivoriambe tao Tailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2020 7:52 GMT
Ny Isaan Human Rights Festival dia hetsika isantaona izay mankalaza ny fahafolo taonany amin'izao, manokatra sehatra iray hiadiana hevitra sy hifanakalozana eo amin'ireo vondrona Isaan voahilikilika, ireo mpiaro ny zon'olombelona ary diplaomaty vahiny. Sary sy soratra avy amin'ny The Isaan Record
Ity lahatsoratra navoaka ity dia avy amin'ny The Isaan Record, tranokalambaovao tsy miankina any Tailandy, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty. Tatitra fanampiny nataon'i Christopher Burdett sy Hathairat Phaholtap. Sary nalain'i Adithep Chanthet.
Olona maherin'ny 300 no nivondrona nanoloana ny Oniversite an'i Ubon Ratchathani ny 16 Desambra 2019 hiresaka mikasika ny toerana misy ny zon'olombelona ao avaratra-atsinanan'i Tailandy.
Nahavory vondrona manerana ny faritra, mafana fo, manampahaizana, mpianatra, ary diplomaty vahiny maro ilay Fetibe faha-10 ho Fiarovana ny Zon'olombelona fanaon'ny Isaan Human Rights isantaona. Nandray anjara tamin'ilay hetsika ihany koa ilay Masoivoho Soedoà, Staffan Herrström, niresaka momba ny vina iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny zon'olombelona tanatinà valandresaka manokana.
Nampiatranoin'ny Faculty of Liberal Arts (Fakiolten'ny Kanto Liberaly) ao amin'ny Oniversiten'i Ubon Ratchathani ary niarahany nikarakara tamin'ny The Isaan Record, nanome sehatra tsy dia fahita firy ahafahan'ireo Vondrona Isaan iantefan'ireo tetikasam-pampandrosoana sy ny politikan'ny governemanta milaza ny fitarainan'izy ireo.Nasongadiny ihany koa ny anjara asan'ireo mpiaro ny zon'olombelona ao an-toerana ka nanomezany azy ireo sehatra ahafahana miresaka ireo fanamby atrehin-dry zareo.
Nilaza i Thawat Maneephong, mpandrindra ilay sehatra fifanakalozana hevitra fa :
Matetika ireo tantara avy amin'ny fomba fijery ao Bangkok irery no hany rentsika. Ny mahery fo ao Bangkok no mahery fo resahana. Tsapako fa eo andalam-pametrahana ny fomba fitantarantsika isika amin'ny alalan'ity hetsika ity.
Lalàna navadika ho miaramila ?
Raha miresaka kokoa ny ao Isaan-Lao, sary matroka no nandokoan'ireo mpandray fitenenana momba ny zon'olombelona any avaratra atsinanana ary zara raha misy fanantenana kely hahatsara ny toedraharaha eo ambany fifehezan'ny governemanta miaramila-sivily mifangaro ankehitriny.
Duangthip Karnrit avy amin'ny Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), (Thai mpisolovava ho an'ny zon'olombelona), fikambanana iray mpandresy lahatra, no nahatsikaritra fa nihamaro ireo olona ao Avaratra-Atsinanana no tsy navela hisitraka ny zony hiteny malalaka, hiditra anaty fikambanana, na hanao fivorian'ny daholobe intsony hatramin'ilay fanonganam-panjakana miaramila niseho ny taona 2014.
Taorianan'ilay fanonganam-panjakana dia nanao totoafo nampiasa fomba roa ny junta : ny didy mandrara ny fivoriambe ara-politika mihoatra ny solontena dimy, ary ny lalànan'ny Fivorian'ny Olontsotra . Maherin'ny 100 ny olona lasa mpitsoa-ponenana ara-politika raha toa ka sivily miisa 2.408 [manerana ny firenena] no voatery niatrika fitsarana tany amin'ny tribonaly miaramila.
Ny volana Mey 2014, ny fitondrà-miaramila, ny National Council for Peace and Order (NCPO) – Filankevi-pirenena ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana – no naka ny fahefana teo am-pelatànan'ny governemanta voafidy tamin'ny fomba demokratika. Nahavita nanangana governemanta niaraha-nitantana tamin'ny miaramila ny Palang Pracharat Party, antoko politika tohanan'ny NCPO, taorian'ny fifidianana nehe-be resaka tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity, izay nametraka ny fillohan'ny NCPO, Jen. Prayut Chan-o-cha, mba ho filoha mpitondra. Ny volana Jolay, rava tamin'ny fomba ofisialy ny NCPO, fa ny miaramila kosa mbola manohy mampiasa ny fahefany.
Nanakiana ny politika nampiasaina sy nampiharina fony fitantanan'ny NCPO ireo hafa mpandray fitenenana tamin'ilay hetsika, izay tsy nahitana loatra ny fandraisana anjara avy amin'ny vahoaka tamin'ny firongatry ny korontana sy ny fifandirana sôsialy tao amin'ny faritra.
Nipaporn Pula, solontena avy any amin'ny vohitr'i Ta Mui ao amin'ny distrikan'i Kong Chiam Ubon Ratchathani, no niresaka momba ny fiantraikany ratsy amin'ny politikam-pananrenana ny ala ataon'ny junta. Mponina marobe ao Ta Mui no miatrika fandroahana taorian'ny niampangana azy ireo ho nanorim-ponenana tao amin'ny Valam-pirenena Pha Taem.
Efa taranaka maro nifandimby izahay no nitoetra teto. Tsy vitako ny tsy hisaina hoe tsy misy azonay olona mahantra honenana eto Tailandy. Tsy misy ilana azy ny rafi-pitsarana. Maninona ry zareo no misivana ho isika mahantra ihany no ampiharana ny lalàna ? Maninona izy ireo no tsy afaka mampihatra ireny fenitra ireny amin'ny olona ao an-tanandehibe? Avela hiady amin'ny fanjakana manontolo ny olona miaraka amin'izay kely ananany, nefa misy mpanohana. Tsy rariny izany.
Manerana ny faritra, vondrompiarahamonina tan'àla maro no manohitra ny fanesorana azy ireo amin'ny tany izay lazain'izy ireo fa efa niainany talohan'ny fanambarana azy io toerana io ho faritra àla arovana. Hatramin'ny 2014, rehefa nanomboka nampihatra ilay politikany ny NCPO, hatramin'ny Septambra lasa teo, efa nahatratra 28.000 ny tranganà tsy fanarahandalàna voalaza nanodidina ny ala, izay velarantany efa ho 820 000 rai (131.200 ha).
Saingy tsy ny resaka maizina mikasika ny zon'olombelona ihany anefa no niandreketan'ny governemanta miaramila tao anatin'izay dimy taona lasa izay, araka ny fanazavan'ireo mpandahateny sasany.
Nanambara i Arunee Santhitiwanich, mpampianatra ao amin'ny Fakiolten'ny Siansa Politika ao amin'ny Oniversiten'ny Ubon Ratchathani fa tsy hoe manamafy ny tsy fitovian-tsaranga efa misy eo amin'ny fiarahamonina fotsiny ihany ny fanjakana Tailandey fa manimba ihany koa ny tena fandraisana anjaran'ny besinimaro.
Isaky ny misy ny korontana, ny fametrahana komity no tetika ankafiziny sy fampiasan'ny fanjakana, satria ahazoan'izy ireo fotoana ny fanaovana izany. Amin'ny fanendrena ireo mpiasampanjakana izay azo afindra alohan'ny fahitàna vahaolana, roritina ny fizotran'ny zavatra rehetra. Miteraka hadisoam-panantenana ho an'ny olona mihevitra hoe efa dinihana ny famahana ny olan'izy ireo anefa izany
Mandritra izany fotoana izany, ny fihainoana tsy maintsy atao amin'ny daholobe ho an'ireo tetikasa fampandrosoana dia saiky tsy nisy mponina avy any ifotony nandray anjara satria voalazan'ny fitsipika fa ny mpikambana voasoratra anarana ara-dalàna ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany no mahazo alàlana hanatrika ao, hoy i Arunee.
Tao anatin'ireo adihevitra telo narindra, nifampizara fomba fijery isankarazany ireo mpandray anjara mikasika ny fomba hiatrehana ireo fanamby eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona any Tailandy. Ny sasany nilaza fahatsapana tena ho toy ny “olom-pirenena tsy hita maso” tsy manan-jo na iray aza, raha ny hafa kosa nilaza ny faniriana lalina misy any anatin'ireo tanora te-handao ny fireneny.
June, vehivavy mpianatra avy ao amin'ny Fakiolten'ny Kanto Liberaly, nilaza hoe :
Manafoana ny zontsika sy ny fahalalahantsika ny toe-draharaha politika ankehitriny. Rehefa mijery ny namako anaty tambajotra sosialy aho dia maro amin'izy ireo no te-handao ny fireneny satria tsy mahita làlana izy ireo ary tsy manana fanantenana mihitsy. Ary mazava ho azy, eo koa ny olana ara-toekarena.
Mpampianatra iray efa nisotro ronono, avy ao amin'ny distrikan'i Khong Chiam, no nilaza fa maro tamin'ireo mpianany taloha no lasa mpitondra fiarakaretsaka ao Bangkok satria vitsy ny làlana ahafahan'izy ireo mamelon-tena any amin'ny faritany niaviany avy. Namporisika ny tanora izy mba tsy hirona amin'ny fahalaindainana politika loatra fa kosa hiaraka hirona hisian'ny fiovana ara-tsosialy.
Raha isika olo-mahantra no tsy mitaky ny zontsika, dia hitoetra ho vovoka ambany faladian'ny hafa eo foana isika.
Nizara ity fomba fijery ity Sompong Viengchan, mafana fo efa ela nihetezana nanohitra ny tohodrano Pak Mun ao Ubon Ratchathani ary nampanantsoin'ny miaramila taorian'ny fanonganam-panjakana:
Raha mahita olona mangalatra ireo ombidiantsika ve isika, moa hijery fotsiny ary avelantsika hanao izany izy ireo ? Tsia! Mila mijoro isika, mihorakoraka ary mitabataba. Mila manao izay hahamenatra ny governemanta isika, na hanao izay hahatsapan'izy ireo ny henatra tokony ho tsapany amin'ny fampiasany herisetra sy fampitahorana an'ireo mponina izay miezaka fotsiny miaro ny fivelomany.
Tanaty fivoriana manokana ny tolakandro, nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fandraisana anjara ampahibemaso ho toy ny singa fototra an'ny demokrasia ny masoivoho soedoà Staffan Herrström. Noresahany ihany koa ny momba ny traikefa miabo amin'ny fitsinjaram-pahefana izay nahatonga an'i Soeda tsy ho firenena “mahantra, tsy mitovy, tsy demokratika tamin'ny taonjato faha-19” ka tonga amin'izao toerana misy azy izao.
Nidera ny herim-pon'ireo mpiaro ny zon'olombelona any amin'ireo firenena toa an'i Tanzania, Polonina, Vietnama, Myanmara, ary RDP ao Lao i Herrström. Saingy naneho koa ny ahiahiny mikasika ny fitomboan'ny fihetsiky ny governemanta mandray fanapahankevitra amin'ny fomba tsy refesi-mandidy hampanginana ny mpitsikera sy hanitsakitsahana ny zon'olombelona.